Translate Myanmar (Burmese) to Russian | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Russian, Myanmar (Burmese) to Russian translations, Myanmar (Burmese) to Russian Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Привет как дела
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Здесь есть кто-нибудь?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Я очень люблю тебя
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Сколько стоит этот гамбургер?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Можете ли вы назвать мне такси?
ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး я прошу прощения
ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို Я заинтересован
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Мой рейс был отложен
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Я здесь для бизнеса
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Привет меня зовут
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Извините, но я женат
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Я хотел бы спросить вас
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Можете ли вы отвезти меня в аэропорт?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Какое сейчас время, пожалуйста?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Где находится ближайший полицейский участок?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Могу я заимствовать зарядное устройство для телефона, пожалуйста?
ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား? Вы можете мне помочь?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Закажите мне выпить, пожалуйста?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Сколько это стоит?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး У меня аллергия на глютен
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Вызовите врача
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Есть ли врач?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Могу я позвонить?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Позвоните, пожалуйста, ваш босс.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Это место очень приятно
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Отвезите меня в отель, пожалуйста
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Какой номер моей комнаты?